Ravalomanana Marc: Sao voafandrika ao ianao?
2016-09-15 @ 17:53 in Politika
Raha ny marina dia tsy te-hiditra politika politisiana, na politika miresaka na manonona anaran'olona intsony aho. Fa indraindray dia tery ihany ny hanoratra sy hanoro hevitra. Tsy voatery ho marina izay soratako fa mba eritreritra fotsiny ihany. Efa mba noteneninao ihany fa tsy ekenao ny resaka fanonganam-panjakana, itovizantsika hevitra ny amin'iny zavatra iray iny. Fa na inona na inona hevitra tsy itovizana dia tsy mety amintsika ny fanonganam-panjakana afa-tsy amin'izay fomba eritreretiko mbola tsy holazaiko izay, fa avelako eo ny amin'iny.
Misy ny andian'olona miezaka mafy hanao izay hamaranana ny fitondrana ankehitriny, nefa ry zareo ihany no niezaka mafy ny hametraka azy teo tamin'ny fomba rehetra na tsara izany na ratsy, efa tsy niteny loatra intsony izahay tamin'ny fomba famoahana ny valim-pifidianana izay miharihary fa fanamboaran-tsaina fotsiny fa efa vita lamina ny hala-bato tamin'izany fotoana izany. Koa na tena tsy ankasitrahana mihitsy aza ny ataon'ny eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao, ny kiantranoantrano ataon'ireo olombitsy, ny fanafihan-jiolahy ataon'ireo tompon'ny fitaovam-piadiana eto amin'ny firenena, dia tsy hahatonga ahy hiantoraka any amin'ireo nahazo toerana tamin'ny tetezamita vokatry ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2009 velively izany.
Raha misy andrakandrana fidinana an-dalambe nanehoan'ny mpitondra ny heriny tamin'ny fandefasana mpitandro ny filaminana an'arivony teny amin'ny araben'ny fahaleovantena, dia efa manana tetipanorona ireo vondron'olona ireo. Tanjona voalohany ny isintonana ny fon'ny olona hoe ry zareo no mitarika ny mpanohitra ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Mety mahafantatra tsara ihany koa ireo olona ireo fa tsy haharesy ny eo amin'ny fitondrana mihitsy raha vao fifidianana izany no resahina eto Madagasikara. Koa tsy maintsy ampîasaina ny loha amin'ny hahazoana indray ny fitantanana ny fitondrana amin'ny fomba rehetra na tsara izany na ratsy. Noho izany, tsy ho fantatrao mihitsy izay tena tanjon'ireo vondron'olona ireo ary, amiko manokana, dia fandrika mety ahafahana mandoto anao ny fanarahana azy ireo na fanatevenan-daharana azy ireo. Afaka miditra na manatevin-daharana ianao raha hainao tsara ny tanjony ka ahitanao tombontsoa ao anatin'izany, fa lasa sorona avy hatrany kosa ianao raha tsy hainao akory izay kendreny amin'izao fihetsiketsehana ataony izao (Sady efa malaza ho tsy tia anao daholo ireo olona ao rehetra ireo).
Koa dia izay no hamaranana ny hafatro hoe: Sao voafandrika ao ianao raha mijabajabaka ao?